ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » 10 အမျိုးသားများအဘို့အပထမဦးဆုံးနေ့စွဲမတ်မတ်အကြောင်းသိကောင်းစရာများ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇန်နဝါရီ. 20 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးရှာဖွေနေမရသောအခါလူအားလုံးတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်. မြက်ခင်း mowing သောအခါကြှနျုပျတို့သစ်ကိုအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်င်. ငါတို့သည်ငါတို့၏ရှပ်အင်္ကျီအပေါ်ကော်ဖီယိုလာသောအခါကျွန်တော်နေ့၌အသစ်တစ်ခုကိုလုပ်ဖော်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်. ထိုစကားကိုအဝင်အဖြစ်, ကျွန်တော်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးအထင်အမြင်အောင်တယောက်အခွင့်အလမ်းသာရ. ကြှနျုပျတို့လုပျနိုငျမညျ, သို့သော်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့်လုပ်ဖော်ကျနော်တို့လိုချင်ထက်ဖြစ်နိုင်ပိုပြီးမြင်. တစ်ဦးကရက်စွဲကွဲပြားခြားနားသည်. ပဌမ, သင်သည်အခြားနေ့စွဲများအတွက်အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည်ဟုအာမခံချက်မရှိပါ. ဒုတိယ, သူသည်သင်၏အိမ်နီးချင်းသို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ထက်သင့်ရဲ့အသွင်အပြင်အကြောင်းအများကြီးပိုဂရုစိုက်သွား. စိတ်မပူပါနဲ့, သော်လည်း. ငါနှင့်အတူကူညီပေးဖို့ဒီနေရာမှာပေါ့ 10 အမျိုးသားများအဘို့အပထမဦးဆုံးနေ့စွဲမတ်မတ်အကြောင်းသိကောင်းစရာများ.
1. ထိုအဖြစ်အပျက်၏ထုံးနည်းအဆင့်ဝတ်စားဆင်ယင်. စားသောက်ဆိုင်နီးပါးသည်အခြားလူတဦးသည်အားကစားဂျာကင်အင်္ကျီကိုဝတ်ဆင်လိမ့်မည်ဆိုရင်, သငျသညျတစျဦးမပါဘဲတက်မပြသင့်တယ်. သင်ကိုယ်တိုင် underdressed တှေ့လြှငျထိုသို့ဖွင့်ဝတ်စားဆင်ယင်ထက်ယင်ကောင်အပေါ်ဆငျးသကျဝတ်စားဆင်ယင်ဖို့အများကြီးပိုလွယ်င်.
2. ရာသီဥတု fit မှစားဆင်ယင်. သင်ညစာစားပွဲအစီအစဉ်ဆိုပါစို့နှင့်ညစာစားပြီးနောက်သင်၏ရက်စွဲအချိုပွဲသည်လမ်း၌ဆင်းလမ်းလျှောက်အကြံပေး. သို့ဖြစ်. သင်သည်ပြင်ဆင်သိုစေလို.
3. ကောင်းတဲ့ဖိနပ်ကိုဝတ်ဆင်! လှန်လာသောသေတ္တာသို့မဟုတ်တင်းနစ်ဖိနပ်အဘယ်သူမျှမ…သငျသညျကမ်းခြေသို့မဟုတ်ကစားတင်းနစ်မှာမဟုတ်လျှင်. အမြိုးသမီးမြားဖိနပ်ကိုချစ်ကြပြီးရင်းသင့်သတိထားမိပါလိမ့်မယ်.
4. သင့်ရဲ့ရှပ်အင်္ကျီကိုသံ. ကျနော်တို့သတိထားမိမှာမဟုတ်စေခြင်းငှါ (သို့မဟုတ်ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု) ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်္ကျီ ironed ခံရလျှင်, ဒါပေမယ့်သူမကအများဆုံးဖွယ်ရှိအကြောင်းကြားစာလိမ့်မည် (နှင့်စောင့်ရှောက်မှု).
5. ကောင်းစွာကိုက်ညီသောအရာတစ်ခုခု Wear. သင်၏အဝတ်၏မထိုက်မတန်အမှတ်တံဆိပ်ထက်ပိုအရေးကြီးတယ်, စတိုင်သို့မဟုတ်အရာအားလုံးထက်. တစ်စူပါတင်းကျပ်စွာရှပ်အင်္ကျီဝတ်ဆင်ဖို့စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံသငျတို့သူတို့အဘို့…မလုပ်ပါနှင့်…မဖြောင့်ပြုပါ…
6. သင်အသုံးပြုကြသည်တစ်ခုခု Wear နှင့်အဆင်ပြေ. သင်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲအပေါ်ဦးနှောက်အာရုံကြောရလေ့ရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်လျှင်, စိုးရိမ်ရန်ကိုယ့်ကိုကိုယ်တဦးတည်းနည်းပါးသောအရာကိုပေး.
7. တစ်ခါးပတ်ဝတ်ဆင်ကသင့်ရဲ့ဖိနပ်ကိုက်ညီသေချာအောင်. ၎င်းသည်သင့်ကိုမတ်မတ်ပိုမိုပြည့်စုံစေတယ်.
8. တုံ့ပြန်ချက်များကိုရယူပါ. သင့်ရဲ့အခန်းဖော်မေးပါ, မိတ်ဆွေ, လုပ်ဖော်သို့မဟုတ်သင်သည်သင်၏မတ်မတ်နှင့် ပတ်သက်. ယုံကြည်စိတ်ချသူတစ်ဦးဦး. သင်သည်ထိုသူတို့သငျသညျဝတ်စားဆင်ယင်ကြကုန်အံ့စရာမလို, သင်မူကား, OK ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ရိုးရိုးလေးကိုတောင်းဆိုနေတာသင်ကူညီစေခြင်းငှါ.
9. လွန်းအစွန်းရောက်သို့မဟုတ် flashy ဘာမှမဝတ်ပါနဲ့. သင်သည်သင်၏အဘိုးနဲ့တူဝတ်စားဆင်ယင်ရန်မလိုပါ, သင်မူကားသင်၏အဝတ်တစ်အာရုံဖြစ်ချင်ကြပါဘူး. ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာ…
10. သင်နေတတ်သလိုနေပါ! အမြိုးသမီးမြားယုံကြည်မှုကိုချစ်. သင့်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဖော်ပြထားတာကအရာတစ်ခုခုကိုဝတ်ဆင်.